Fanamboarana singam-pitsaboana :: Hamokatra karazam-panafody roa ambin’ny folo ny Pharmalagasy • AoRaha
Fanamboarana singam-pitsaboana Hamokatra karazam-panafody roa ambin’ny folo ny Pharmalagasy
Nigadona teny amin’ny seranam-piaramanidina teny Ivato, omaly, ireo fitaovana milanja zato taonina hampiasaina amin’ny fananganana an’ilay orinasa famokarana fanafody « Pharmalagasy », araka ny fampanantenan’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry. Fanamby napetrany teo am-pandraisana an’ireto fitaovana ireto, teny an-toerana, ny « hamokaran’io orinasa io karazam-panafody vita malagasy miisa roa ambin’ny folo ao anatin’ny telo taona monja ».
« Mpikaroka sy manampahaizana malagasy sy vahiny maromaro no hiaraka hiasa ao amin’ity orinasa malagasy mpanamboatra fanofody ity. Tanjona ny hamokarana fanafody ho an’ny Malagasy sy ho an’izao tontolo izao mihitsy », hoy ny Filoha.
Famadihana ny CVO
Nampahafantariny ny fahavononan’i Madagasikara amin’ny fiatrehana ny fifaninanana maneran-tany. Fantatra fa saika hita eto Madagasikara avokoa ny ankamaroan’ireo singa ilaina amin’ny famokarana fanafody ao amin’ny Pharmalagasy.
Isan’ny akora hampiasaina ao amin’ity ozinina vaovao ity, ohatra, ny «Arthemisia ». Hanamboatra ny fanafody antsoina hoe « CVO+ », izay hitsaboana an’ireo marary mitondra ny tsimokaretina « Covid-19 », saingy amin’ny endriny vaovao ny toerana.
« Nisy ny fanavaozana natao. Mitohy foana kosa, na izany aza, ny famokarana ny tambavy Covid-organics miaraka amin’ny Ivon-toerana famokarana fanafody vita amin’ny zava-maniry malagasy (IMRA) », hoy ihany ny Filoha Rajoelina Andry.
Hampiasa ampaham-bola betsaka ao amin’ny orinasa Pharmalagasy ny fanjakana. Misokatra hoan’ireo Malagasy hafa kosa anefa ny fandraisana anjara amin’ny petra-bola ao amin’io orinasa io.
Fambolena sy fiompiana :: Tafajoro ny fiantohana momba ny fiovan’ny toetry ny andro